Ny firafitry ny Adhesive-News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Ny firafitry ny fametahana konductive
Fotoana: 2020-07-23 Hits: 29
Ny adhesive mihetsika dia adhesive miaraka amin'ny fitondran-tena sasany aorian'ny fikarakarana na ny fanamainana. Izy io dia afaka mampifandray ireo fitaovana conductive isan-karazany mba hamoronana làlana elektrika eo anelanelan'ny fitaovana mifandray. Amin'ny indostrian'ny elektronika, nanjary fitaovana ilaina tsy takatry ny saina ny «conductive conductive».
Ahoana ny herinaratra haingam-pandeha amin'ny herinaratra?
Ny fifandraisan'ny sombin-kôpta mihetsika dia mamolavola lalana iray, izay mahatonga ny conductive adhesive conductive. Ny fifandraisana marin-pototra eo anelanelan'ny sombin-tsolika ao amin'ny sosona adhesive dia vokatry ny fanasitranana na fanamainana ny adhesive conductive. Alohan'ny hanasitranana na hamainina ilay adhesive conductive dia sarahina ao anaty adhesive ny partie conductive ary tsy misy fifandraisany mitohy, ka ao anaty insulateur no misy azy ireo. Rehefa sitrana na maina ilay dity conductive dia mihena ny habetsaky ny adhesive noho ny fihenan'ny solvent sy ny fanasitranana ny adhesive, hany ka ny partie conductive dia ao anaty fanjakana mitohy maharitra miaraka amin'izy samy izy, ka maneho ny fitarihana.
Inona no sangan'asa fototra amin'ny adhesive conductive?
Ny adhesive conductive dia mazàna amin'ny matrix resin, partie conductive, additives manaparitaka, agents auxiliary, sns. Ny matrix dia misy epinxy resin, resina acrylate, polychloroester, sns, na dia misy conductivity aza ny firafitry ny polymera tena mifangaro volo, toy ny rafitra pyridine macromolecular , izay afaka mitondra herinaratra amin'ny alàlan'ny elektrôna na ions, ny fitaritana an'io karazana adhesive conductive io dia mety hahatratra ny haavon'ny semiconductors fotsiny, ary tsy afaka hitovy amin'ny metaly. Ny fanoherana ambany ihany dia manahirana ny filalaovana fifandraisana conductive. Ny ankamaroan'ny adhesives conductive ampiasaina eny an-tsena dia karazana filler.
Ny matrix resin an'ny adhesive conductive-type filler, amin'ny ankapobeny, dia afaka mampiasa karazana matrixes resin, adhesives thermosetting izay matetika ampiasaina toy ny resin epoxy, resin silikônika, résin polyimide, resin phenolika, rafitra adhesive toy ny polyurethane sy acrylic resin. Ireo adhesives ireo dia mamolavola ny firafitry ny taolana molekiola ao amin'ny adhesive conductive aorian'ny fanasitranana, manome ny toetra mekanika sy ny fiantohana ny fiantohana, ary mamela ny poti-pameno conductive hamorona fantsona. Hatramin'ny mety ho sitrana ao amin'ny efi-trano na any ambanin'ny 150 ° C ny valanisan'ny epoxy, ary manana fatra-pampianarana sy famolavola manandanja, ny fihanaky ny epoxy dia mihetsika.
Ny lakaoly mitondra dia mitaky ny fitarihan'ny sombintsombiny fitondra-tena ary ny haben'ny sombintsombiny dia tokony ho ao anatin'ny elanelam-potoana mety, ary azo ampidirina amin'ny matotra lakaoly mitondra lalana hamoronana lalana fitondra-tena. Ny famenoana conductive dia mety ho vovoka volamena, volafotsy, varahina, aliminioma, zinc, vy, nikela, grafita ary fitambarana fitarihana sasany.
Ho fanampin'ny matrix resin, filler conducteur ary diluents, ny singa hafa amin'ny adhesive conductive dia mitovy amin'ny adhesives, ao anatin'izany ny agents crosslinking, agents de recplement, preservatives, toughening agents and thixotropic agents.
Ahoana ny Xianglong Keypad's ashesive conductive?
Ny fingotra mitondra dia vita amin'ny silika voajanahary voajanahary, izay mahatohitra ny fitafiana, ny harafesina ary ny fahanterana, sns. Ny elastika bokotra dia mety hahatratra 180-200g.
Taloha: 2 Wooden Box 4x4 Matrix Waterproof Zinc Alloy Keypads Export
Next: Fa maninona ny ankamaroan'ny fitaovana elektronika no mampiasa jaketa 3.5mm?